Heerka sare ee 'MacBook Pro' waxaa la wareegaya iPad-ka cusub ee loo yaqaan 'M1 | Waxaan ka socdaa mac
Bishii Abriil 20 markay ahayd dhacdo khadka tooska ah ka socota, Apple waxay ku soo bandhigtay, waxyaabo badan, cusub iPad Pro oo leh M1. Mashiin dhab ah oo hadda loo tixgeliyo inuu yahay beddel sax ah oo Mac ah Laakiin sidoo kale, haddii aan fiiro gaar ah u yeelano tirooyinka ay muujineyso, waxaan haysannaa qalab ka sarreeya kan hadda jira ee loo yaqaan 'MacBook Pro' oo leh Intel. Duurjoog ah.
Benchmarks waxay muujineysaa in iPad Pro M1 ay bixiso kororka xawaaraha 50% oo ka sarreeya heerka sare ee MacBook Pro. Amarada ugu horreeya ee iPad Pro M1 ayaa loo qorsheeyay inay gaaraan macaamiisha dabayaaqada bishan. Kahor imaanshahaas, natiijooyinka ugu horreeya ee halbeegga kiniiniga cusub ee ugu xirfadda badan Apple ayaa gaaray Geekbench, natiijooyinkuna waxay caddeeyeen sheegashooyinka Apple ee ah in barnaamijka cusub ee iPad Pro uu 50% ka dhakhso badan yahay kuwii ka horreeyay.
Jiilka shanaad ee iPad Pro oo leh processor M1 dhibco hel hal-xuddun ku dhow 1.700 iyo tirooyin dhowr-geesood ah oo ku dhow 7.200. Isbarbardhigga dartiis, iPad Pro 2020, oo ay ku shaqeyneyso processor A12Z, wuxuu ku guuleysanayaa dhibco 1.100 iyo 4.656 oo ah halbeegyo halbeegyo iyo xarumo badan leh, siday u kala horreeyaan.
Waxqabadka iPad Pro M1 wuxuu la siman yahay Macs-ka cusub ee 'M1 chip', oo si weyn uga fiican iPad Pro A12Z wuu badalayaa. Xitaa wuxuu garaacayaa dhamaadka-dhamaadka 16-inch MacBook Pro, kan labaad oo kaliya xulashada isku xidhka iMac iyo Mac Pro Marka waa ikhtiyaar wanaagsan kuwa aan rabin kombuyuutar. Hadda, waxaan ku dhahayaa in dhibaatada iPad Pro ay tahay in nidaamka qalliinka uusan ahayn macOS. Markaa ma awoodi doonno inaan ku dhaqaaqno ficillo gaar ah oo aan ku qaban karno Mac. Laakiin dabcan waxa aan gacanta ku haynaa waa mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » iPad » Heerka sare ee 'MacBook Pro' waxaa la wareegaya iPad Pro cusub oo wata 'M1'
Apple M1 Ugu Dambeysa Linux Kernel Horeba Tijaabinta